Nhau - Simudzira shanduko yakanaka ye e-mabhasikoro, uye iyo TBIT mhinduro inogonesa echinyakare e-bhizinesi mabhizinesi
Simudzira shanduko yakanaka ye e-bikes, uye iyo TBIT mhinduro inogonesa echinyakare e-bhizinesi mabhizinesi
Muna 2021, Smart e-mabhasikoro yave "nzira" yemakemikari makuru kukwikwidza musika mune ramangwana. Hapana mubvunzo kuti chero munhu anogona kutungamira munzira nyowani yehungwaru anogona kutora kutungamira munharaunda ino yekumisazvee-bhasikoro indasitiri pateni.
smart e-bhasikoro mhinduro
Muiri indasitiri, iyo huru e-bhasikoro zvigadzirwa zvakagara zvichitungamira akangwara kutsvaga kwekuyedza, kunyangwe mamwe makambani mazhinji emabhizimusi anodawo kukwikwidza mugove wepayi. Musika wakaratidza kuti vashandisi vane mukurumbira wepamusoroakangwara zvigadzirwa, uye zvigadzirwa zvakangwara, zvine akasiyana makwikwi zvakwakanakira, regai mabhizinesi ave nekodzero dzemitengo yakazvimirira, uye vatengesi vanewo purofiti yakawanda Zvinogona kutaurwa kuti iyoakangwara nguva ye e-mabhasikoro ari kuuya.
Iwo maCountermeasure mu akangwara Era
Iko maitiro e smart e-bhasikoro zvakajeka, mabhizinesi anofanirwa kubata sei nazvo? Nekutie-bhasikoro vagadziri vanoita zvetsika kugadzira, akangwara achiri munda unoshamisa. Kunyangwe iyo yekumhanyisa yekunze iri inotyisa, iyo bofu dhizaini yeiyoakangwara munda unoda mari hombe uye haina kuwana mibairo yakanaka.